Aprimo: Oke Ngwaọrụ maka Azụmaahịa Ejikọtara | Martech Zone
N'afọ a, anyị na-ahụ ụfọdụ ọganihu dị ịtụnanya na ihu ndị ọrụ maka ndị na-ere ahịa. N'afọ gara aga, ezutere m ndị ndú na Aprimo mgbe gị na ya kwuchara okwu Haresh Gangwani, ndị VP nke Product Strategy. Companylọ ọrụ ahụ gbanwere gia na nso nso a wee malite ịnye Software dị ka nsụgharị "Studio" nke Ọrụ.
E webatakwara m ma zute onye isi ha bụ Bill Godfrey ogologo oge. Ọ bụ ihe ịrịba mkparịta ụka banyere Marketing mgbanwe… na m dị mwute ikwu na a dara ogbenye ọrụ idekọ ya na m nwere iji tụfuo ya. 🙁 Obi na-adịkwa m ụtọ na m hụrụ ihe ọhụrụ CMO Lisa Arthur onye nwere afọ iri abụọ ma ọ rụọ ọrụ maka ndị dike dịka Oracle, Akamai na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị ọzọ.
Ihe m leda anya kpamkpam bụ ngwaọrụ dị ịtụnanya nke Aprimo mepụtara n'ịntanetị wee tinye n'aka ndị ahịa ha. Ọ bụ ezie na ndị isi na-ere ahịa azụmaahịa ndị ọzọ agbanwebeghị njirimara ha na ọtụtụ afọ - ma ka na-ejikwa njikọta siri ike nke njikwa onye ọrụ, edemede na API iji wuo usoro azụmaahịa ọkaibe - Aprimo enyela ndị ahịa ya nne nke ahụmịhe onye ọrụ niile dị mfe, mara mma, na ịrụ ọrụ ịdọrọ na dobe arụmọrụ.
Nke a bụ ihe atụ nke nha nhazi nkewa nkewa. Ngwaọrụ nwere ike dọkpụrụ n'ime interface ma jiri ngwa ngwa hazie ya. Usoro ahụ na-enye ọnụọgụgụ na ijiji. Mgbasa ozi abụghị nanị na email, usoro nkewa akpaaka na-akpaghị aka nwere ike wepụta ndepụta nzipu ozi na ofufe iji nye mkpochapụ mkpọsa ọtụtụ,
Ndị na-ere ahịa nwere ike iwulite ọkaibe na-akpali akpali site na usoro usoro ihe eji eme ihe:
Dịka ndị ahịa na-ele anya iji hụ na atụmatụ ha niile na-aga nke ọma, azịza ya na-enye kalenda na echiche Gantt nke ọtụtụ mkpọsa:
Site na Aprimo saịtị:
Ike Aprimo agbakwunyere, na sọftụwia ire ahịa na-enyere ndị ahịa B2C na B2B aka ịga nke ọma na-agbanwe ọrụ nke azụmaahịa site na ịchịkwa mmefu ego na itinye ego, na-ewepu silos na-arụ ọrụ nke ọma yana na-eme mkpọsa ọtụtụ ọwa iji mee ka ROI nwere ike ịba ụba. Ebumnuche anyị nwere ike ịhazi maka mkpa nzukọ gị na modulu maka mmemme mmemme, MRM Marketing Resource Management, DAM Digital Asset Management, EMM Enterprise Marketing Management, Atụmatụ Azụmaahịa, Atụmatụ Mgbasa Ozi na Atụmatụ, Njikwa njikwa, Social Media Management, na ndị ọzọ.
Gị Aprimo's saịtị maka ozi ndị ọzọ. Aprimo na-ebipụtakwa ụfọdụ ihe ịtụnanya Blọọgụ na ahịa a tụrụ.
Tags: aprimoụgwọ godfreymmemme ahiaIhe omumenjikọ ahịa
Dee 18, 2016 na 10: 25 AM
Ndewo Douglas ọmarịcha edemede na isiokwu ahịa echekwara.
Akpaaka na-arụ ọrụ dị mkpa na 21st narị afọ. Otutu nke ndu ndu na ire oso ahia bu ihe omuma atu nke a. Mgbakwunye ahịa agwakọtara na akpaaka na-enyere aka ịchọpụta omume onye ọrụ yana nzaghachi ngwa ngwa na ọnụego ntụgharị.